Maharary ny lohaliko rehefa aondriko
amin'ny alàlan'ny admin amin'ny 20-10-23
Maharary ny lohaliko rehefa aondriko izy ary manitsy azy mihoatra ny 25% ny olon-dehibe mijaly noho ny fanaintainan'ny lohalika. Ny lohalintsika dia mijaly noho ny tsindry betsaka noho ny ataontsika isan'andro. Raha mijaly amin'ny fanaintainan'ny lohalika ianao, dia mety ho hitanao fa marary ny lohalikao rehefa miondrika sy manitsy azy. Check ou ...
Fa maninona no marary ny lohaliko?
Fa maninona no marary ny lohaliko? Ny fanaintainan'ny lohalika dia toe-javatra mahazatra eo amin'ny olona amin'ny taona rehetra. Mety ho vokatry ny trauma na ratra, na aretina izay miteraka fanaintainan'ny lohalika maharitra. Betsaka ny olona mahatsapa fanaintainana manontany hoe maninona no marary ny lohaliko rehefa mandeha aho? na maninona no marary ny lohaliko rehefa ...
Fiasan'ny fiarovana ny andilana
Inona ny fiarovana ny andilana？ inona ny andraikitry ny fiarovana ny andilana? Ny fiarovana ny andilana, araky ny anarany dia ampiasaina hiarovana ny andilana manodidina ny lamba. Ny fiarovana ny andilana dia antsoina koa hoe andilana sy andilana. Amin'izao fotoana izao, io no safidy tsara indrindra ho an'ny mpiasa mipetrapetraka sy maharitra efa ela ...
Mety ho ratsy amin'ny atidohanao koa ny tavy
Ny tavy any an-kibo dia efa noheverina ho ratsy ho an'ny fonao hatrizay, fa ankehitriny, ny fanadihadiana vaovao dia manampy porofo bebe kokoa amin'ny hevitra fa mety ho ratsy amin'ny atidohanao koa izany. Ny fandinihana, avy any Royaume-Uni, dia nahitana fa ny olona matavy loatra ary manana refy ambony (andrefan'ny tavy kibo) dia manana ...
Ahoana ny fomba fanaovana maska ​​tsara amin'ny COVID-19
Alao antoka fa manarona ny orona sy ny vava ilay saron-tava Ny virus COVID dia miparitaka amin'ny rano mitete; miparitaka izany rehefa mikohaka na mievina na miresaka mihitsy aza isika. Tetezana iray avy amin'ny olona iray no nifindra tamin'ny olon-kafa, hoy ny Dr. Alison Haddock, miaraka amin'ny Baylor College of Medicine. Nilaza i Dr. Haddock fa mahita lesoka amin'ny sarontava izy. K ...
Tombony 7 amin'ny fisotro rano amin'ny vavony foana amin'ny maraina
1. Manatsara ny metabolismanao Ny fanadihadiana dia naneho fa ny fisotroana rano amin'ny vavony foana dia afaka manampy amin'ny fampitomboana ny tahan'ny metabolika hatramin'ny 30%. Midika izany fa ny tahan'ny fandoroana kaloria dia mitombo efa ho ny ampahatelony. Fantatrao ny dikan'izany hoe marina? - Ny fihenan-danja haingana kokoa! Raha ny tahan'ny metabolika ...